तरकारीमा नुन चर्को हुँदा के गर्ने ? तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु
जनवरी 11, 2019 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments तरकारी, नुन
हामी खाना वा रोटीसँग तरकारी खाने गर्छौ । धेरै मिहिनेत गरेर तरकारी अथवा दाल त बनाइन्छ, तर कहिलेकाहिँ भने नुन बढी भएर धेरैलाई चिन्ता हुने गर्छ । नुन बढी भएको तरकारी खान गार्है पर्छ । यस्तै आफ्नो मिहिनेत परेको हुँदा फाल्न पनि त्यति सजिलो हुँदैन । नुन बढी भएको तरकारी र दाललाई के गर्न सकिन्छ ? तरकारीमा नुन चर्को हुँदा के गर्ने ? जान्नुहोस् ! तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु यस प्रकार छन् ।
तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु
१. तरकारीमा नुन बढी भएको अवस्थामा आलुले राहत दिलाउन सक्छ । आलुलाई ताछेर नुन बढी भएको तरकारी र दालमा राख्नाले नुनिलोको मात्र कम हुन सक्छ । पूर्ण रुपले नुनिलोको समस्या समाधान नभएतापनि नुनिलोलाई केहि मात्रामा कम गराउन आलुले मद्दत गर्छ ।
२. आँटाको पिठोलाई प्रयोग गरेर पनि तरकारीमा नुनिलो घटाउन सकिन्छ । यसको लागि नुन चर्को भएको तरकारी अथवा दालमा आँटाको डल्ला बनाएर राख्नपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा नुनको मात्र तरकारीमा घटेर जान्छ ।
३. तरकारी र दालमा दहि मिसाउनाले पनि नुनिलोको मात्र केहि हदसम्म कम गर्न सक्छ । नुन चर्को भएको तरकारीमा दहि मिसाउँदा तरकारीको स्वादमा पनि केहि परिवर्तन आउन सक्छ । तर नुनको मात्रा पनि केहि हदसम्म कम गराउन दहि सहयोग हुन सक्छ ।
४. नुन चर्को भएको तरकारी र दालमा कागतीको प्रयोग धेरै उपयोगी हुन सक्छ । साथै यस उपायलाई धेरै गृहिणीहरुले पनि प्रयोग गर्ने गर्छन् । यसरी तरकारीमा कागतीको रस मिसाउनाले नुनिलो कम हुने मात्र नभई तरकारीको स्वादमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
विरेनुन र यसको प्रयोग
क्यान्सर लाग्न नै नदिने फलफुल र तरकारीहरु
← कस्तो अचम्म ! यी देशमा महिनावारीका बेला महिलालाई विदा दिइन्छ
सपनामा मरेका मानिसहरु आउने कारणहरु →
डिसेम्बर 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 9
नुन : कति गुण कति वैगुण
3 thoughts on “जान्नुहोस् ! तरकारीमा भएको चर्को नुन घटाउने अचुक उपायहरु”
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि काउली खानुका फाइदाहरु
Pingback:आलु र यसका फाइदाहरु
बाडुल्की किन लाग्छ ?